News - General Ihe About ịgbado ọkụ Electrodes
Tianqiao ịgbado ọkụ electrode bụ ọkachamara nhọrọ
Electrogbado ọkụ electrodes dị mkpa, ọ dịkwa mkpa na welder na ndị ọrụ dị mkpa maara ụdị nke eji arụ ọrụ dị iche iche.
Gịnị bụ ịgbado ọkụ electrodes?
Igwe electrode bụ waya waya a na-ekpuchi ekpuchi, nke a na-eji ihe ndị yiri ígwè a na-agbanye ọkụ. Maka ndị na-ebido, e nwere electrodes na-ere ere na ndị anaghị eri ere. Na ọta metal arc ịgbado ọkụ (SMAW) makwaara dị ka osisi, electrodes bụ consumable, nke pụtara na electrode na-iwesa n'oge ya were na-agbaze na weld. Na Tungsten Inert Gas ịgbado ọkụ (TIG) electrodes bụ ndị na-agaghị eri ere, yabụ ha anaghị agbaze wee bụrụ akụkụ nke weld ahụ. Na Gas Metal Arc ịgbado ọkụ (GMAW) ma ọ bụ MIG ịgbado ọkụ, electrodes na-nọgidere nri waya. 2 weldgbado ọkụ arc na-agba ume na-achọ ka electrode tubular na-eri nri na-agbanwe agbanwe.
Olee otú ịhọrọ ịgbado ọkụ electrodes?
Cho na-ahọrọ electrode kpebisiri ike site na ihe ndị a chọrọ nke ịgbado ọkụ ọrụ. Ndị a gụnyere:
E nwere electrodes dị mfe ma dị arọ. Igwe ndị a na-ekpuchi ọkụ nwere mkpuchi ọkụ nke a na-etinye site na nchacha, spraying, dipping, saa, ihichapụ, ma ọ bụ daa. A na-ekpuchi electrodes dị arọ site na extrusion ma ọ bụ na-atasị mmiri. E nwere ụdị mkpuchi atọ dị mkpa: ịnweta, cellulose, ma ọ bụ njikọta nke abụọ. A na-eji akwa mkpuchi dị egwu maka nkedo nkedo, igwe, na ebe siri ike.
Kedu ihe nọmba na mkpụrụedemede pụtara na mkpanaka ịgbado ọkụ?
Ndị American Welding Society (AWS) nwere sistemụ ọnụọgụ nke na-enye ozi gbasara electrode akọwapụtara, dịka ngwa ọ kachasị eji ya yana otu esi arụ ọrụ maka nrụpụta kachasị.
Nkeji Ofdị mkpuchi Ịgbado ọkụ Ugbu a
0 Akwa sodium cellulose DC +
1 Akwa cellulose potassium AC, DC + ma ọ bụ DC-
2 Akwa titania sodium AC, DC-
3 Akwa titania potassium AC, DC +
4 Powdergwè ntụ ntụ, titania AC, DC + ma ọ bụ DC-
5 Obere hydrogen sodium DC +
6 Obere hydrogen potassium AC, DC +
7 Nnukwu ígwè oxide, potassium ntụ ntụ AC, DC + ma ọ bụ DC-
8 Hydrogen potassium dị ala, ntụ ntụ AC, DC + ma ọ bụ DC-
"E" na-egosi arc ịgbado ọkụ electrode. Onu ogugu abuo nke onu ogugu 4 na nke ato mbu nke onu ogugu 5 na-eguzo maka ike ike. Dịka ọmụmaatụ, E6010 pụtara 60,000 pound kwa square inch (PSI) ike ọdụdọ na E10018 pụtara 100,000 psi ike ike ike. Uzo na - esote onu ogugu na - egosi onodu. Ya mere, "1" na-anọchi anya ihe niile ọnọdụ electrode, "2" maka a ewepụghị na kehoraizin electrode, na "4" maka a ewepụghị, kwụ, vetikal ala na-efefe electrode. Abụọ ikpeazụ a kapịrị ọnụ ụdị mkpuchi na ịgbado ọkụ ugbu a. 4
Ntinye Ike ọdụdọ Ọnọdụ Ofdị mkpuchi & Ugbu a
Mara ụdị electrodes na ngwa ha na-enyere aka ịrụ ọrụ ịgbado ọkụ n'ụzọ ziri ezi. Ihe ndị a tụlere gụnyere usoro ịgbado ọkụ, ihe eji arụ ọrụ, ime ụlọ / ọnọdụ mpụga, na ọnọdụ ịgbado ọkụ. Omume dị iche iche ịgbado ọkụ egbe na electrodes nwere ike inyere gị aka ikpebi nke electrode iji maka ihe ịgbado ọkụ oru ngo.